Xasuustii 14 Oct.2017 - Ahmed Abdihadi
14 October 2017 haddii aan dib u xasuusto waxay ahad maalin sabti ah saacaddu qiyaastii 3:30PM xilliga Moqdishu ayay ahayd.
Qaraxa daqiiqdo ka hor aniga Cabdiqani Cali Aadan oo saaxiibkay ah ayaa dhinaca danbe ka soo galnay Hotel Safari. Dhinaca musqusha ayuu iiga leexday anna waxaan toos u aaday dhinca maqaayada bannaanka. Miis iyo kursi geed Hindi ah hoos yaalla ayaan soo kor istaagay.
Kumbyuutar aan watay oo boors iigu jiray ayaan furay; wali waan taaganahay oo ma fariisanin.
Qaraxii ayaa dhacay. Kaddib culays aan dhagaha iyo xubnaha gudaha ka dareemay waxaa igu xigay ee aan arkay waxay ahayd labo arrin.
Nin oday ah oo aan da’diisa ku qiyaasay 50 sano oo Soomow la oran jiray oo leh ha la iqaado asaga oo dhaawac weyn wajiga ugu yaallo.
Ciid iyo boor aad u tira badan oo goobta qariyay.
Intaas kadiib aniga iyo wiil Hoteelka Kashiyaar ka ahaa oo Cabdikariim magaciisu ahaa ayaa ku cararnay luuq gadaal ka baxa. Waxaan dhexda naga sii raacay saaxiibay oo suuliga ka soo cararay oo lug dhaawac ka ah. Aniga lug ayay wax iga soo gaareen, halka Cabdikariim olal oo wajiga ka maray.
Luuqa waxaan iskula soo dhacnay qayb kamid gabadho nadaafada ka shaqeeya oo carar ah.
Markaan luuqa ka baxnay ninba dhinca ayuu u miciin baday. Anigu waxaan galay guri dad ku soo dumay oo wiil yar oo fuundi ah dhagax weyn ku hoos jiro.
Intaan isku tagnay ayaa wiilkii dhagax ka rognay. Intaas kaddib dhiig lugta iga socday owgeed waxaan go’aansaday in aan ka tago goobta.
Waxaan soo aaday xurunta idaacadda goobjoog halkaasoo nin aan saaxibbo nahay gaari igaga qaaday kaddibna aan Digfeer Isbitaal tagnay.
Awoodda qarax iyo khasaaraha uu gaystay waxaan ka fahmay isbitaal Digfeer. Dadkii oo meel lakala dhigo la la’yahay. Dhaawaca, kuwa naftu ka socoto, kuwa shoogsan, dad dhaawac ah oo cid caawisa la’ iyo jawiga aragaggaxa iyo muraga ah.
Labo nin oo aa saaxiibbaday aad iigu dhow ahaa Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle (OK) iyo Cabdiqani Cali seed waxaa loo kala qaaday Turkiga iyo Suudan.
Halka aan aniga iyo Cabdiqani Hotel safari gudihiisa gaga jiranay Cabdiqaadir wuxuu taagnaa dhinca kale ee Hoteelka guriga ku yaalla oo Bisha Cas leedahay.
Soomow oo ahaa ninkii koobaad ee ishaydu qabto alle ha naxariistee qaraxii kaddib wuu geeriyooday.
14 Oct waxay ahayd maalin murugo leh runtii.
Waxaan rabaa in aan maanta si gaar ah halkan ugu xuso shaqsi aan isleeyahay wuxuu si daacadnimo, dareen, iyo awooddiisu intay gaarsiisnayd dadka ugu gurmaday Maalintaas.
Shaqsigaas waa guddoomiyihii hore ee gobolka Benaadir Thaabit Cabdi Mohammed.